Why the Myanmar Leaders hate Muslims of Myanmar ? | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကြီး နှင့် ပသီ(ခ) ဗမာမွတ်စလင်မ်သပိတ်အဖွဲ့
မိုးကုတ်ကျောက်သူဌေး ဦးယောဆက်နဲ့ အင်တာဗျူး (၁) »
My cousin brother U Aungzaw Win wrote>>>
ကျွန်တော့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်း သဘော အရ နည်းပညာဆိုင်ရာပြဿနာတွေ ကို အဖြေထုတ်ရပါတယ်။
ဒါပေမဲ့  တစ်ချို့ပြဿနာ ရိုးရိုးလေးတွေ ကို အဖြေမထုတ်တတ်အောင် ပြိန်းပါတယ်။
မိတ္တီလာမှာ ဗလီတွေ၊အိမ်တွေ အကြမ်းဘက်အဖျက်ဆီးခံရတယ်။
အဖျက်ခံရတဲ့ နေရာတွေကို မူလသက်ဆိုင်သူ၊အကြမ်းဘက်အနိုင်ကျင့်ခံရသူတွေ
ကို ပြန်လည်အသုံးပြုခွင့် မပေးတဲ့ ပြဿနာပါ။
ဘာဖြစ်လို့လဲ လုံးဝ စဉ်းစားမရပါ။
ဥပဒေ နည်းလမ်းတစ်ရပ်အရ ဆိုရင် အဲ့ဒီ လို ဥပဒေကို သိကြပါသလား။
မျှတသော လုပ်ရပ်တစ်ခု အဖြစ် အများပြည်သူလက်ခံနိုင်ကြပါသလား။
သူပုန် ဝင်ပြီးမီးရှို့ တဲ့ရွာမှာ အိမ်တွေပြန်ဆောက်ခွင့် မပေးဘဲထားတတ်ပါသလား။
ရမ်းကား တဲ့ ကား က ဝင်တိုက်လို့ ပျက်ဆီးသွားတဲ့ ကားကို ပြင်ဆင်ခွင့်မပေးဘဲ
ထား ရင် မျှတကောင်းမွန်တဲ့ အုပ်ချုပ်မှုဖြစ်မလား။
Tags: Aung San Suu Kyi, Burma, Min Aung Hlaing, Muslim, Myanmar, Ne Win, Than Shwe, Thein Sein
This entry was posted on August 9, 2013 at 9:46 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
One Response to “Why the Myanmar Leaders hate Muslims of Myanmar ?”
လူသား သစ္စာ တစ်ခုတော့ကြိုပြောထားပါရစေ။ အစ္စလာမ်သာသနာဆိုတာ ချောင်းမြောင်းထဲက လူမသိသူမသိ
သာသနာမဟုတ်ပါ။ ကမ္ဘာ့လူဦးရေ သန်းပေါင်း ၁၅၀၀ ကျော် က ယုံကြည်လေးမြတ်စွာ ကိုးကွယ်
နေကျတဲ့သာသနာပါ။ ဒါကထားပါ။ အခုမြန်မာပြည်မှာ ရှိခဲ့တဲ့ဗလီတွေအကြောင်းပြောလိုပါတယ်။
ဗလီဆိုတာမြန်မာပြည်မှာ ရှေးဘုရင်တွေလက်ထက်ကတည်းကတည်ရှိခဲ့တယ်။ အစ္စလာမ်ဘာ
ကို ကိုးကွယ်တဲ့ မွတ်စလင်ဆိုတဲ့လူမျိုးရှိရင် ဗလီဆိုတာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်။ ဒါကို လွတ်လပ်
စွာကိုးကွယ်ခွင့်ပြုတဲ့ ဘုရင်တိုင်း၊ နိုင်ငံတိုင်းခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ အစ္စလာမ်ဘာသာ
မှာ ဗလီဆောက်ပြီးတိုင်လည်း ပြီးမသွားဘူး။ နေ့ စဉ် (၅) ကြိမ်ဝတ်ပြုဆုတောင်းရတယ်။ ဒါက
မွတ်စလင်တိုင်းအတွက် မဖြစ်မနေလုပ်ရမယ့် သာသနာက ပြဌာန်းထားတဲ့တာဝန်ပါ။ အဲဒီတော့
ဗလီဆိုတာ မွတ်စလင်လူဦးရေ ရှိသလောက်အတွက် လိုအပ်တယ်။ ပြီးရင် ဗလီဆိုတာ တော
ထိပ်၊ တောင်ထိပ်မှာ တည်ရတဲ့အမျိုးမဟုတ်ဘူး။ အမှန်တကယ် သွားရောက်ကျင့်သုံးဝတ်ပြုရလို့ 
လူအများ သွားလာရလွယ်ကူတဲ့ နေရာမျိုးမှာ တည်ထားပေးရပါတယ်။ ဗလီများတိုင်း အစ္စလာမ်
ဘာသာတိုးတက်နေတယ်လို့ လည်းမထင်ပါနဲ့ အုန်း။ အဲဒီဗလီတွေမှာ ၀င်ရောက်ဝတ်ပြုသူများ
ဖြင့်စည်းကားနေမှသာ သာသနာရှင်သန်နေတာပါ။ အဲဒီတော့ ဒီမှာတစ်ချက်စဉ်းစားရမှာက
ရုပ်ဝတ္တုပစ္စည်းများဖြင့် သာသနာ့အဆောက်အဦးတွေကိုမည်မျှများပြားစွာ ဆောက်ထားလင့်ကစား
နှလုံးသားထဲက စွဲမြဲစွာယုံကြည်ပြီး ရိုကျိုးစွာ မကျင့်သုံးသမျှကာလပတ်လုံး ဘယ်သာသနာမှကြာ